Dib-u-Celinta Qiimaha: Maxay u egtahay Xaqiiq Soo Noqoshada? | vfxAlert official blog
Dib u noqoshada qiimaha: fur ikhtiyaar mise maya?
Markuu jiro isbeddel, waxaad had iyo jeer dooneysaa inaad la joogto qof kasta oo aad meherad ka dhigato meeshii qof walba tago. Laakiin waad sameyn kartaa ka soo horjeedka, adoo go'aansanaya inaan ahay mid khiyaano badan oo garanaya sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah marka dib u bilaabashada la bilaabo. Intaa waxaa sii dheer, lacag-sameeyeyaasha iyo ciyaartoy kale oo waaweyn ayaa sidaas sameeya.
Sidee ayuu dib ulaabashada "dhabta ah" u egyahay?
Dib u soo celin ama dib u soo celin qodobkaan waxaa loogu yeeri doonaa xaalad markii sicir bararku uu ka bilaabmo heer aad u sarreeya (intraday max / min, Pivot Point, iwm.) Ama qaab jaantus ah oo ku yaal jaantuska (xuduudaha kanaalka isbeddellada, Fibonacci, the sii deynta wararka aasaasiga ah).
Waxaan dhihi karnaa tani waa ka soo horjeedka jabitaanka, marka suuqa uu bilaabo dhaqdhaqaaq xoog leh, isagoo xaqiijinaya calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah. Xaaladdeenna, inta badan waa mala-awaal, hagaajin faa'iido / lumis ama isku day aan guuleysan oo lagu beddelayo dheelitirka xooggagga dibida / orso.
Waxaa jira laba xaaladood oo ku saabsan horumarka xaaladda:
Qiimuhu wuxuu ku laaban doonaa meelihiisii hore;
Waxaa jiri doona isugeyn gaaban oo cidhiidhi ah ka dib taas oo isbeddelku soo kaban doono oo aan dib u laaban doonin.
Inta badan ee dib-u-guuleysiga aan guuleysan (ugu yaraan 2-3), dadaal badan oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad uga gudubto heerka u dhigma. Sidaa darteed, kahor ganacsiga, waxaa lagugula talinayaa inaad ogaato waxa sixitaanku laxiriira: waxaa jiri kara raasamaal ballaaran oo amarada sugaya ee ciyaartoy waaweyn ama kuwa kale "xiisaha furan" .
Tusaalooyinka ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo dhab ah waxay muujinayaan dib u soo celin ka timaadda heerarka taageerada / adkeysiga:
Shuruudaha dib u soo celinta "run" ah :
Shumaca gadaal rogmaday wuxuu xirayaa meel aad uga hooseysa ama ka hooseysa heerka lagu qiyaasay.
Eeg cabirka jirka: haddii uu ka weyn yahay iskucelceliska isbeddellada ee xilliyadii 5-7 ee la soo dhaafay, tani waxay ku darsaneysaa kalsoonida calaamadda;
Haddii uusan jirin kala-jabid shumaca xiga 2-3, dib u noqoshada waxaa loo qaadan karaa inay tahay mid la xaqiijiyay. Waxaan uga digeynaa taageerayaasha fursadaha muddada-gaaban ee ka dhacayo wax yar: dib-u-noqoshada waa qaab dhismeed aan degganeyn marka loo eego jabinta, sidaas darteed macaamilku waa inuu soconayaa ugu yaraan 4-5 shumacyo waqtiga shaqada.
Waxaan had iyo jeer la socdaan dhaqdhaqaaqa isbeddellada ku Muga suuqa (xitaa sax Muga) iyada oo software ah signal binary ilaa Kanoqo la soo gabagabeeyo. Haddii aysan la socon koror deg deg ah ama dhicitaan, markaa waa uun mala awaal mala-awaal ah .
Sida loo aqoonsado dib u noqoshada beenta ah
Ereyga "been" waxaa loola jeedaa dib u soo celin leh dhaqso uga soo laabashada sicirradii asalka ahaa ama xitaa bilowgii jabitaanka heerka. Halkan, sharafteeda oo dhan, dareenka "lo'da" ee ciyaartoyda yaryar iyo kuwa bilowga ah ayaa muuqda, markay isku dayaan inay "la qabsadaan" isbeddellada iyagoo aan si taxaddar leh u lafa-gurin. Ikhtiyaariguna wuu furmaa markii dhaqdhaqaaqa dhammaadkiisu dhammaado.
At qalbiga qaababka farsamo sida heerarka Fibonacci, pivot Point, Murray oo ku jeclahay waa goan dhawr imtixaan kucelin lagu guulaysan oo xiriir ah, iyo waxaad isku dayi kartaa in ay Xirfado furan "oo dhan" ee calaamadaha ugu horreeya ee Kanoqo ka istaraatijiyadda doorasho binary!
Calaamadaha Burburka Beenta :
Raadinta isbeddellada iyo heerarka muhiimka ah waxay ka socdaan jadwalka waqtiga sare illaa kan ikhtiyaarka loo furi doono.
Tusaale ahaan, haddii ay jiraan ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo ah isbeddel muddo-dhex-dhexaad ah ama muddo-dheer ah oo ku saabsan xilliyada H1-H4, iyo dib-u-soo-celinta / jabinta beenta ahi waxay u muuqdaan kuwo ka bilaabanaya M30, markaa waxay u badan tahay inaan la kulanno fikradaha ka imanaya suuqyada ee "isku riixaya Ciyaartoyda kale, gaar ahaan kuwa bilowga ah ee soo galaya suuqa wax yar uun ka hor dhamaadka xaaladdu.
Sharciga aasaasiga ah ayaa khuseeya: markasta oo uu sii ballaadho waqtiga, ayaa la isku halleyn karaa saadaasha suuqa!
Eeg heerarka farsamo iyo garaaf ee la socda dib u noqoshada. Shumac jir weyn leh iyo hooskiisa yar oo ka hooseeya heer aad u muhiim ah ayaa noqon doona xaqiijin wanaagsan oo soo noqoshada. Moodellada sida "Double Top / Gottom" iyo "Head iyo Garbaha" waxay u muuqdaan inay diiradda saaraan xiiso badan oo furan qodobbada xagjirnimada ah;
Muuqaal ahaan, waxay umuuqataa taxaddarro isdabajoog ah oo dhinacyo badan leh iyo tijaabooyin aan lagu guuleysan, ka dib marka xigashada si dhakhso leh ugu laabato qiimayadeedii asalka ahaa .
Calaamadaha binary-ga ee nool iyo kuwa muddada-dheer ee bilaashka ah, xilliga dib-u-noqoshada waa inay ka hooseysaa (hoos-u-dhaca) ama ka sarreysa (kor u kaca) sicirka u dhow maalintii hore;
Haddii dib u soo celinta ay ka timaaddo isbeddelka taageerada / iska caabinta, iyo oscillators-ka sida MACD / RSI / Kala-baxa Stochastic, calaamaddu waxay u eg tahay inay been tahay.
Markaan aragnay runta dib u celinta, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto habka aan ku ganacsan doonno. Waxaa jira ikhtiyaarro kala-soocid badan oo midkoodna waa nooca qiimaha, taas oo ku habboon istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah:
Taageero / iska caabin kasta, oo ay ku jiraan heerarka "wareega", halkaas oo labada lambar ee ugu dambeeya xigashada ay la mid yihiin 00 ama 50;
Isbeddelka xadka iyo khadka dhexe;
Qiimo xoog leh max / min: maalinle, toddobaadle ah, ayaa la xisaabiyaa;
Heerarkii hore iyo kuwa hadda jira ee isku-beddelka celceliska.
Muhiim: xitaa haddii dib udhaca uu si cad u muuqdo, aragtida muuqaalku ma noqon karto isha kaliya ee soo galka, iyadoon loo eegin istiraatiijiyadda la adeegsanayo. Had iyo jeer raadso xaqiijin ku saabsan oscillators iyo mugga .
Sidoo kale, ha iloobin in dib-u-socod kasta oo xambaarsan ay la socdaan waxyaabo male-awaal ah oo qarsoon, sidaa darteed, adoo adeegsanaya ganacsiga noocan ah, waa inaad isticmaashaa maareyn lacag adag.
Sidoo kale, ha iloobin in Kanoqo kasta oo xanbaarsan la Qariyo qaybaha kuteen, sidaas daraaddeed, isticmaalaya noocan ah ganacsiga, waa in aad isticmaasho maamulka lacag badan adag.
Barxadda ganacsiga laba-geesoodka ah ee dallaal kasta oo halis ah waxaa ku jira istiraatiijiyad u gaar ah, laakiin dhammaantood waxaa loo qaybin karaa kooxaha soo socda:
1. Tilmaam la'aan . Waxay ku saleysan yihiin falanqaynta garaafka iyo kordhinteeda, tan ugu caansanna waa Qiimaha Waxqabadka. Habkani wuxuu soo jiidanayaa newbie's maxaa yeelay waxay ula muuqataa mid iyaga ka fudud, laakiin dhab ahaantii waxay u baahan tahay khibrad aad u fara badan oo si dhakhso leh loo aqoonsado qaababka sida dhifka ah uga muuqda shaxanka qaabka caadiga ah.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira dad aan awood u lahayn inay muuqaal ahaan u falanqeeyaan qaabka, xaaladdan, waxaad isku dayi kartaa inaad horumariso awooddan adoo adeegsanaya farsamooyin gaar ah ama haddii natiijadu aysan halkaas oolin, u beddelo calaamado ganacsi oo tilmaama badan.
2. Ka soo kabashada khadka tooska ah . Ta ugu "qadiimiga" laakiin isla waqtigaas istiraatiijiyad la socota oo la isku halleyn karo oo deggan, taas oo ku saleysan mabda 'fudud: marka suuqa uu kor u kaco (isbeddelka isbeddelka), waxaan ka shaqeynaa dib u soo noqosho, siday u kala horreeyaan, marka qiimaha hoos u dhaco, waan shaqeynaa baxay kor u dhaqaaq
3. Dib uga noqoshada heerarka qiimaha intraday . Dib-u-soo-celin xoog leh ayaa badanaa dhacda iyada oo ay sabab u tahay ficilada ciyaartoy waaweyn oo ku dadaalaya inay u beddelaan heerarka muhiimka ah jihada ay u baahan yihiin, ama iyagoo ka shaqeynaya boosas badan oo sugaya. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida ay u shaqeyso, eeg istaraatiijiyadda “Ganacsi Tricky”
Waqti kasta iyo hantida ganacsi marwalba waxaa jira heerar qiimo leh oo muhiim ah haddii aan xasuusnaano kuwa sameeya suuqa iyo kuwa bixiya calaamadaha ugu fiican ee muuqaalka ah waxay marwalba arkaan danta furan ee kaqeybgalayaasha yaryar iyo boosaskooda furan, way cadahay sababta istiraatiijiyaddan loogu adeegsaday xoog iyo gaabin ereyga suuqa.
Tusaalaha xulashooyinka dib u noqoshada ee heerarka "wareega" oo xaqiijinaya Stochastic (gadaal uga soo noqoshada aagga lagu iibsaday).
Sida aad u aragto, wax waliba si fiican ayey u shaqeeyaan. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la doorto hanti aan lahayn isbeddel aad u sarreeya, iyo aagag isbeddel ah oo la sheego, tusaale ahaan, Euro / Dollar (EUR / USD).
4. Celceliska dhaqdhaqaaqa . Kalsoonida calaamadaha ganacsiga ee nool ayaa si weyn kor ugu kacaya dhaqdhaqaaqa dib-u-soo-celinta ee fudud (SMA) iyo sarrifka (EMA) celceliska celceliska socodka ee dhererka 200, 50 ama 20. Gaar ahaan "xoog" 200-xilli, halkan dib-u-celinta waxay macnaheedu noqon kartaa isbeddel dhammaystiran ee isbeddelka.
5. Dib uga noqoshada qiimaha xad dhaafka ah . Mid ka mid ah isku dhafka ugu fiican waa kanaalka qiimaha iyo heerka awoodda isla waqtigaas. Xadgudub maxalli ah ayaa muujinaya xuduud cusub oo ah heerka isbeddelka qiimaha: heerka ugu badan ee iska caabinta, heerka taageerada -.
6. Dib u soo celinta max / min muddooyinkii hore . Haddii kiiskii hore aan ula jeednay sicir-dhimis xad-dhaaf ah, markaa xaaladdan waxaan ka hadli doonnaa heerarka xoogga leh sida dib-u-soo-celinta xuduudaha maalmihii hore (tusaale ahaan, waxaan ka soo qaadan karnaa istiraatiijiyadda "80/20" ee Linda Raschke)
Waqtiga lagu taliyay waa M30, waqtiga dhicitaankiisu waa 2-3 shumacyo waqtiga shaqada (ugu yaraan 5 daqiiqo).
7. Xadgudubyo ku yimaada marinnada qiimaha . Ganacsi noocan oo kale ah ayaa loo isticmaali karaa ka dib wararka iyo isbeddelka sare inta lagu jiro guri, marka marinku ballaadhan yahay. Xulasho: Kanaalada Donchian ee max / min iyo Bollinger guutooyinkooda markay celcelis ahaan dhaqaajinayaan. Si loo sifeeyo dib u soo celinta beenta ah, waxaan dib u tijaabinaynaa xuduudaha iyo khadka dhexe iyadoo la adeegsanayo xog taariikhi ah.
Soo koob . Ka ganacsiga ku noqoshada dib u celinta waxay siineysaa faa iido xasiloon, laakiin aan ka badneyn xeelado kale oo ikhtiyaarro ah, in kasta oo xayeysiinta alaabada lacagta la bixiyo badanaa lagu xayeysiiyo "dakhli dhakhso leh" Waxaa muhiim ah in la fahmo in dhicitaanka macaashku aanu ahayn oo keliya natiijada falanqaynta saxda ah ee sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah; dilaalku waa inuu sidoo kale ku shaqeeyaa xawaare sare iyo siibasho yar.